के केकी अधिकारीले गोप्यरुपमा सुटुक्क बिहे गर्दै, को हुन् बेहुला ? – Sandes Post
के केकी अधिकारीले गोप्यरुपमा सुटुक्क बिहे गर्दै, को हुन् बेहुला ?
April 20, 2022 535
काठमाडौं । धेरै कलाकारहरू छन्, जो आफ्नो प्रेम जीवनलाई सोसल मिडिया र मिडियामा छताछुल्ल बनाउन हिच्किचाउँदैनन् । ‘फलानोले गरिन् प्रेमी सार्वजनिक’ भन्ने टाइपका समाचारहरूसँग पाठक अभ्यस्त नै छन् ।
यस मामलामा फरक छिन् नायिका केकी अधिकारी । लामो फिल्मी करिअरमा पनि अफेयरका कुराहरू कहिल्यै सार्वजनिक चर्चामा आएनन् । प्रेम र विवाहजस्ता कुराहरू सेलिब्रिटीको ‘प्राइभेसी’ भित्र पर्छन् भन्ने मान्यता उनको छ । यस्ता विषयमा उनी मिडियासँग कहिल्यै खुलिनन् ।
यसैबीच, आज अचानक केकीले गुपचुप विवाह गर्न लागेको हल्ला भुसको आगो झैं फैलिएको छ । पुष्टि भने हुन नसकेको हल्लाअनुसार केकी आजभोलि नै एकदमै गोप्यरूपमा विवाहवन्धनमा बाँधिन लागेकी हुन् ।हल्लाका विषयमा बुझ्न खोज्दा उनको फोन रिसिभ भएन ।
उनी निकटस्थ कलाकारहरूले सकारात्मक संकेत गरे पनि पुष्टि गर्न चाहेनन् ।केकीनिकट एक अभिनेत्रीले भनिन्, ‘उनले पहिल्यैदेखि आफ्नो विवाह गोप्य तरिकाले गर्ने चाहना व्यक्त गर्थिन् । भोलिपल्ट फोटो आएपछि थाहा भयो भने पनि चित्त नदुखाउनु भन्थिन् ।
यदि आजै विवाह हुन लागेको हो भने भोलि फोटो आइहाल्छ । त्यतिञ्जेल प्रतीक्षा गर्नुस् ।’केकी कसैसँग रिलेसनसीपमा भए-नभएको विषयमा पनि उनले खुलाउन चाहिनन् ।‘उनी हामीजस्तो आफ्नो प्राइभेट लाइफमा पनि बाहिर फतर-फतर गर्दै हिँड्ने कलाकार होइनन् । उनको प्राइभेसीको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
हामीले केकीका बुबा निर्देशक बद्री अधिकारीसँग पनि बाहिर चलेको चर्चाका विषयमा जिज्ञासा राख्यौं । उनले न स्वीकार गरे, न अस्वीकार ।यति मात्र भने, ‘म बाटोमा छु, यो विषयमा अहिले बोल्न मिल्दैन ।’स्रोतका अनुसार केकी एक युवकसँग अफेयरमा थिइन् । उनी उमेरले केकीभन्दा कान्छा हुन् ।
Prevअदालतमा पल शाहलाई भेटेपछि सबै चौपट भयो भन्दै रोए दुर्गेश थापा
Nextराप्रपाको चुनावी प्रतिबद्धता : कक्षा १२ सम्म निःशुल्क, सुत्केरीलाई तीन हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता
नायक पल शाह प्रहरी थुनामा जानु अगाडी खेलेको अन्तिम म्युजिक भिडियो भाइरल,पलको फ्यानहरुले गरे यस्तो कमेन्ट
पल र गायिकाको बिहे ३ महिनामै डिभोर्स हुने ज्योतिषको खुलासा
नेपालमा कपडा सिलाउने सियो पनि बन्दैन, छोटो समयमा नै तीन करोडभन्दा बढीको सियो आयात